Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiishii Xilkoodii Waayay Ee Wayaanaha oo Ol-ole Bilaabay, Sababta.
Saraakiishii Xilkoodii Waayay Ee Wayaanaha oo Ol-ole Bilaabay, Sababta.
Posted by Dulmane	/ May 24, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay ol-ole xoogan wadaan saraakiishii wayaanaha ee dhawaan xilal koodii laga qaaday, kuwaas oo ubadnaa qoomiyada talada wadanka isasiisay ee Tigreega.
Sida xogta aan kuhelayno saraakiishan oo mar ahaan jiray kuwo xilal waawayn kahayay wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa bilaabay shirar iyo is xulufaysi ay kuminjo xaabin rabaan xukuumada cusub ee wayaanaha ee uu hogaaminayo ninka ay sida wayn isaga soo horjeedaan ee Abiye Axmed.
Saraakiishan oo uu horkacayo Abay Sahay oo mar ahaan jiray gacanta midig ee xukuumadii kaligii taliye Malis Zinawi ayaa kuhowlan sidii ay ukicin lahaayeen qoomiyadaha Axmaarada iyo Tigreega, iyagoo dadka shacabka ah kubeerlaxawsanaya in labahdilay labadaas qoomiyadood ee talada wadanka isubadali jiray.
Dhinaca kale xog hoose oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in uu dalka kabaxay General Getachew Asafa oo mudo 17 sano ah ahaa taliyaha ciidanka sirdoonka wayaanaha, isla markaana ahaa tiirwayn oo kooxda TPLF kamid ah.
General Getachew Asafa ayaa lasheegayaa in isaga iyo xaaskiisii ay galeen wadanka Maraykanka halkaas oo sida lasheegayo uu ciyaalkiisii urartay si uu uga badbaado xabsi iyo xilkaqaadis la isugu daro. Waxaana lahadal hayaa in Getachew Asafa uu dowlada Maraykanka waydiisan doono magan galiyo siyaasadeed.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa wadanka Gumaysiga Itoobiya kasocday howlgal balaadhan oo wadanka lagaga sifaynayo saraakiishii hore ee wayaanaha kuwaas oo dadka shacabka ah dhibaatooyin lixaad leh ugaystay. Siwayna ugu amar kutaaglayn jiray talada wadanka.